Kitapo loharano lehibe: kisary 908 + 1.973 hisintona maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | sary Masina, dia midika hoe
Raha milaza ianao fa tsy mila mampiditra zana-tsipìka kely amin'ny famolavolana dia mety handainga indrindra ianao. Ary tsy maintsy ho hitanao fa sarotra be indraindray ny mahazo zana-tsipìka maharesy lahatra antsika, izay mifanaraka amin'ny tetikasanay ... Ary rehefa tsapanay izany, dia nandany fotoana tamin'ny zavatra kely toa izany izahay.
Izany tokoa aza mandany fotoana intsony amin'ny famoronana zavatra efa noforonina, mitondra anao ho mpanjakanao izahay anio. Ny lahatsoratra izay manangona ny tsara indrindra (ary malalaka kokoa) fonosana fisintomana maimaim-poana. Satria eny, azonao atao ny misintona ireo kisary ireo maimaimpoana ary miara-miasa amin'izy ireo. Vakio.
908 + 1.973 XNUMX sary misintona maimaim-poana
Entypo dia andiana sary sy sary 250 vita amin'ny tanany. Rehefa misintona ny fonosana ianao dia afaka mahita azy ireo ho isan'ny typeface, amin'ny endrika EPS, PDF ary PSD. Izany rehetra izany dia ambanin'ny fahazoan-dàlana hampiasana CC BY-SA 3.0. Ireo piktograma dia noforonin'i Daniel bruce, famoronana zokiny manampahaizana manokana amin'ny fiainana nomerika ao Stockholm. Ny famolavolana tranonkala Entypo sy ny fivoarany dia notanterahin'i Andreas Blombäck, izay mipetraka any Stockholm ihany koa.
Typicons Izy io dia andiana sary masina 308 azonao ampiasaina amin'ny tranokalanao. Toy ny Tsy maintsy mampakatra rakitra typicons.css ao amin'ny fonenanao ianao araka ny nohazavaina tao lesona tsikelikely ity.
Ny fonosana Brankic1979. Ity dia fonosin'ny kisary 350 maimaim-poana hisintomana maimaim-poana. Araka ny nolazain'izy ireo tao amin'ny tranonkala dia tonga lafatra izy ireo amin'ny rindranasa, tranokala na zavatra hafa azonao eritreretina. Ny tsy azonao dia ny mizara an'io kisary io raha tsy misy ny fankatoavany: saingy afaka mampiasa azy ireo ianao amin'ny asa manokana sy ara-barotra.
Ary izahay dia mamarana ity lahatsoratra loharano ity amin'ny toerana iray hikarohana sary masina bebe kokoa. Ao amin'ny IconMonster ho hitanao ireo kisary mainty sy fotsy 1973 maimaim-poana. Eto amin'ity tranonkala ity dia azonao atao ny mizaha amin'ny fikarohana mivantana ao anaty boaty fifanakalozan-kevitra milaza hoe "Karohy" na amin'ny fipihana ireo kisary miseho aorian'ny boaty voalaza. Ilay voalohany dia mandefa anay any amin'ny pejy fandraisana an'ny IconMonster. Ny faharoa dia ampiasaina hanehoana kisarisary kisarisary antsika amin'ny tranonkala. Ny fahatelo dia mampiseho amintsika ireo sary masina malaza indrindra amin'ny tranonkala. Ary ny iray farany dia mampiseho amintsika ireo sokajy izay sokajiana ny sarin'ity fivarotana an-tserasera ity, izay: fototra (fototra), orinasa (orinasa), varotra (varotra), fitaovana (fitaovana), interface (interface), miscellaneous (miscellaneous ), haino aman-jery, tamba-jotra (tambajotra), fiarovana (fiarovana), famantarana (famantarana), sosialy ary tranonkala.
Te hanana bebe kokoa ve ianao? Mijanona miaraka amin'ity fonosana kisary maimaim-poana 120 ho anao.
Fanazavana fanampiny - Kitapo kisary maimaim-poana 120 ho anao
Loharano - Entypo, Daniel bruce, Andreas Blombäck, Typicons, IconMonster, Brankic1979
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » sary Masina » Kitapo loharanom-pahalalana: sary miisa 908 + 1.973 hisintona maimaim-poana